KUNGQONGQISWE IMOTO YEKHANSELA – Sivubela intuthuko Newspaper
Esithombeni imoto kaKhansela Nomveliso Nomvethe egqogqiswe ngomlilo
USAMANGELE uMkhandlu waseMandeni ngesehlakalo esethusayo sokushiswa kungqongqiswe imoto kaKhansela Nomveliso Nomvethe onguSotswebhu weqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) kuMkhandlu waseMandeni oholwa nguKhansela Thabani Mdlalose.
Lesi sehlakalo esethuse abaningi kubikwa ukuthi senzeke ngobusuku bomhlaka-28 ku-August 2020.
Ngemuva kwalesi sigameko kwavulwa icala esiteshini samaphoyisa saseSundumbili khona eMandeni, enyakatho yesiFundazwe, iKwaZulu Natal. Kunxuswa bonke okungenzeka babe nolwazi ngalesi sigameko ukuba banikezele ngolwazi olungasiza kakhulu ekutheni babanjwe maqede bavalelwe abenzi bokubi.
Kunanencwadi lapho khona uKhansela Nomvethe eqinisekisa khona lesi sigameko. Ekugcineni uyisayinile. Wafaka nezinombolo zakhe zikamazisi.
Ifundeka kanje: “Mina Khansela Nomveliso Nomvethe onguSotswebhu weqembu elibusayo kuMkhandlu waseMandeni ngiyaqinisekisa ukuthi ngoLwesihlanu womhlaka -28 ku-August imoto yami yashiswa ngabantu abangaziwa. Lokhu kwenzeka kuWard 7 okuyilapho engihlala khona.”
Uma eqhubeka echaza uthi: “Imoto yashiswa ngesikhathi ngisapakile kudriveway. Angichithanga sikhathi lolu daba ngabe sengilubika ngaleso sikhathi emaphoyiseni. Ngenhlannhla enkulu amaphoyisa akwazi ukuthi asheshe aphuthume endaweni yesigameko. Sabe sesiyiphusha imoto siyisusa kudriveway siyiyisa ngaphakathi egcekeni.”
UKhansela Nomvethe uthi okwabamangaza kakhulu kunakho konke wukuthi ekuseni kakhulu futhi bavuka le moto isiqala phansi isivutha futhi okuyinto eyabashiya nemibuzo engenazimpendulo.
Uthi bazama ngakho konke okusemandleni abo ukuyicima kodwa ngeshwa elikhulu kwaba nhlanga zimuka nomoya njengoba ethi imizamo yabo yaphelela ezeni. Imoto uthi yagcina ishile yangqongqa yaphela nje nya phambi kwabo.
UMGADLI UKHONJWE INDLELA KU-ARROWS